ठुलो सोच: कोरोना स after्कट पछि हामी कस्तो विश्व निर्माण गर्ने छौं? : मार्टिन Vrijland
स्रोत: बचाव समय.कॉम
स्विस मनोचिकित्सक कार्ल जंगले भने, "तपाईंलाई ध्यान दिने कुरा बढ्दो छ।" अब तपाईं सोध्न सक्नुहुनेछ कि यो एक प्रमाणित प्राकृतिक कानून हो, किनकि तपाईं वैज्ञानिक रूपमा कसरी त्यस्तो कुरा प्रमाणित गर्नुहुन्छ? हामी अब 'विशेषज्ञहरू' सुन्नको लागि प्रयोग गर्दैछौं र हामी पनि सोच्छौं कि त्यहाँ धेरै जानकारी छ कि ती सबै फिल्टर गर्न गाह्रो छ।
यद्यपि जंगले के भन्छ त्यहाँ धेरै सत्य छ। अब यदि म तपाईंलाई भन्छु, "बिरालोको बारेमा नसोच्नुहोस्।" तपाइँ के सोच्नुहुन्छ? बिरालोलाई। यो हाम्रो दिमागले कसरी कार्य गर्दछ भन्ने महसुस गर्न सहयोगी छ र त्यसैले यसको वास्तविक सम्भावितलाई सक्रिय गर्न समय आइसकेको छ।
अब म भन्न चाहन्न कि तपाईंले मेरो कुरा सुन्नु पर्छ। अब म तपाईंलाई यो साइटमा सामेल हुन र तपाईंको अखबार वा टिभी सदस्यता रद्द गर्न भन्न चाहन्न, तर तपाईं यो सोच्न सक्षम हुनुपर्दछ कि सही भविष्यवाणी गरिएको छ र त्यसैले तपाईंलाई यो महत्त्वपूर्ण लाग्न सक्छ। विशेष गरी अहिले।
जब तपाईं तयार हुनुहुन्छ, अब त्यहाँ एक विशेष ठाउँ छ जहाँ तपाईं आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ र जहाँ अरूले प्रतिक्रिया दिन सक्दछन्। यो स्थान हो जहाँ तपाईं आफ्नो ध्यान दिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईं बढ्न चाहनुहुन्छ।
म तपाईंलाई मेरो पुस्तक पढ्न वा यहाँ साइटमा लेखहरू पहिलो पढ्न भन्दिन। यो सम्भव छ, यो अनुमति दिइन्छ र यो उपयोगी छ यदि तपाईं भाग लिनुहुन्छ कि तपाईंलाई थाहा छ कि कसरी धारणा व्यवस्थापनले काम गर्छ र तपाईंलाई थाहा छ कि आईएमबी कर्मचारीहरू कसरी काम गर्छन्। त्यसोभए यो उपयोगी छ यदि तपाईले वास्तविकतालाई हामीले हेर्नु भए अनुसार निर्माण गरिएको हो। यो गर्नुहोस्।
पुस्तकमा मँ भन्छु कि तपाईंसँग सोच्ने शक्ति भन्दा तपाईंसित धेरै शक्ति छ। तपाईं अब सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाइँ ध्यान दिनुहुन्छ बढ्दै छ, जंग भने। के तपाइँ तपाइँ रचनात्मक ध्यान पैदा गर्दछ। भाइरस आफैंमा बाँच्न सक्दैन। यसलाई अतिथि कक्ष चाहिन्छ। उही एक सबै-समाहित भाइरस प्रणाली को लागी जान्छ कि यो ग्रह चलाउँछ; यद्यपि शक्तिशाली र अनुभवहीन लाग्न सक्छ। हामी हाम्रो रचनात्मक उत्पत्तिबाट यो भाइरस अवस्थालाई जित्न सक्छौं।
यदि तपाईंलाई प्रारम्भिक उमेरदेखि नै थाहा छ कि तपाईंमा त्यो मौलिकता छ, यदि तपाईंले वर्षौंसम्म अनुभव गर्नुभयो भने केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि तपाईं अहिले घरमा हुनुहुन्छ र सबै फरक छ भने; ठ्याक्कै त्यसो भए पछि त्यो मौलिकता सक्रिय गर्ने समय आउँछ। त्यसकारण, विश्वमा प्रवेश गर्नुहोस् जुन तपाईं आफ्नो चेतनाबाट सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ र अब तपाईंको विचारहरू साझा गर्नुहोस्। सुरू गर्न तपाईको छनौट गर्नुहोस्।
तपाईको किताब तपाईंको फोरम
वास्तविकता बनाम वास्तविक वास्तविकता को धारणा
आफ्नो छवि गठनमा हस्तियों, गपशप, खेल समाचार, सेक्स (र अधिक) को प्रभाव
ट्याग: ध्यान, कोरोना संकट, कोरोनाभाइरस, विशेष, फोरम, दिन्छ, बढ्छ, विचारहरु, je, जवान, कार्ल, यसको बारेमा सोच्नुहोस्, wat, संसार
6 अप्रिल 2020 मा 19: 08
जे भए पनि, यो स्पष्ट छ कि बिल गेट्सले मेरो लागि यो 'लकडाउन' गरेको उद्देश्य के हो…
8 अप्रिल 2020 मा 10: 48
पछिल्ला २- generations पुस्तासम्म सम्पूर्ण जनजाति र सबैलाई निरन्तर कन्डिसन र ईन्ट्रोक्रिनेटेड र ब्रेन वाश गरिएको छ कि सरकारले तपाईको ख्याल राख्नु पर्छ र सरकार तपाईलाई पालनादेखि चिहानसम्म हेरचाहमा छ भन्ने धारणाको साथ।
फाइदा / सब्सिडी / भत्ता वा सरकारी काम मार्फत धेरै ठूला समूहहरू खाना र पेयमा निर्भर हुन्छन् भन्ने तथ्यले पनि हाम्रो दिमागमा यो निर्भरता अझ लंगरमा परेको छ।
मिडिया जस्ता (उदाहरणका लागि, तर हजारौं उदाहरणहरू छन्) उपभोक्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर जोड दिइरहेका छन् कि सरकार द्वारा उचित तरिकाले नियमन नगरेको कुरा उठाउनु पर्छ र समाधान गर्नुपर्नेछ किनभने सरकारले सबै कुराको व्यवस्था गर्नुपर्दछ र हाम्रो लागि सबै गर्नुपर्दछ। हाम्रो प्रिय सरकार।
चर्चको पनि त्यस्तै समारोह भएको थियो, तर त्यो अलि अलि भएको छ।
यो मान्छेले बुझ्ने समय हो कि कुनै पनि तपाईंको लागि होईन र त्यहाँ कुनै पनि छैन भनि पक्का गर्नको लागि त्यहाँ पनी तपाईं पछाडि झर्न सक्नुहुन्छ। सरकारहरू केवल त्यहाँको अन्तिम लक्ष्यका लागि छन्, श्री एको उनको एजेन्डाको परिचयको लागि सेवा दिन, र जो कोही पनि जो सतह माथिको मिलिमिटर छ उसको लागि काम गर्ने छ या त भित्रबाट वा शायद साकार बिना।
हामी आफैंमा फिर्ता खस्नु छ र कहिलेकाँही यो पर्याप्त गाह्रो हुन सक्छ।
मेरो बुबालाई पनि थाँहा थियो, उनी ठूला षडयन्त्रको बारेमा केही जान्दैनथे (त्यसैले बोल्दै) तर उनले मलाई सधैं आग्रह गरे कि तपाईलाई सहयोग गर्ने कोही पनि नहुने वा तपाई पछाडि फर्कन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाई सँधै यो एक्लो गर्नु पर्छ।
यदि तपाईंले बुझ्नुभयो र अन्ततः तपाईंले यो महसुस गर्न सक्नुहुनेछ कि यो तपाईंको केशिकाहरूमा सत्य छ, यसले तपाईंलाई बल पनि दिन सक्छ।
« कोरोनाभाइरस कोविड - १ and र विज्ञान: यसले कसरी तपाइँको शरीरमा प्रवेश गर्दछ र तपाइँ यसलाई कसरी स्थानान्तरण गर्नुहुन्छ?
कोरोना संकट: प्रारम्भिक ट्र्याकि and र अनुप्रयोगहरू नभएसम्म लकडाउनबाट बाहिरिन २ देखि years वर्ष सम्म लाग्न सक्दछ »
कुल भ्रमण: 2.613.271